မတူပီမြို့ တွင် မတူ စာပေနှင့်ယာဉ်ကျေး မှုကော်မတီခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ် - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»မတူပီမြို့ တွင် မတူ စာပေနှင့်ယာဉ်ကျေး မှုကော်မတီခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ်
By admin on	 March 10, 2013 Headline
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မတူပီမြို့ ၌ မတူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေး မှု ကော်မတီတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည့် ခေါင်းဆောင်သစ် များကို ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့ တွင် ရွေး ချယ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခေါင်းဆောင်များရွေးချယ်ရေးနှင့် ရှေ့ လုပ်ငန်းချမှတ်နိုင်ရန် မတူပီမြို့That Dun Church ၏ Batupuei Baptist Area (BBA) ရုံးခန်းတွင် အစည်းအဝေးပြု လုပ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ အစည်းအဝေး တွင် (၇၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း ယနေ့( ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ ၁၀) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ဝေ သည့် The Matupi Times သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အဆိုပါသတင်းစာက မတူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ဥက္ကဌအဖြစ် Rev. Hai Lai Thang, ဒုတိယ ဥက္ကဌအဖြစ် Saya An Sai အတွင်းရေးမှူး၊ Pastor Kui Lung, တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး Saya Okla Bik နှင့် အဖွဲ့ ဝင် ၂၀ဦးတို့ ကို ရွေး ချယ် လိုက်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
Chin Association for Christian Community (CACC) လူကြီးများနှင့် မတူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေး မှု ကော်မတီခေါင်းဆောင်များတွေ့ ဆုံခဲ့စဉ်တွင် မတူပီမြို့ နယ်အတွင်းရှိ မတူဘာသာစကား သုံးစွဲနေ သည့် မတူမျိုး နွယ်စုများသည် ဟားခါးစာပေကို မူလတန်းအဆင့် ဘာသာ တခုအဖြစ် တရားဝင် သင်ကြားရန် ချင်းပြည်နယ် အစိုးရက အတည်ပြုခဲ့သည်နှင့်အညီ ယင်းအစည်းအဝေး တွင်လည်း ယင်းကိစ္စကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
သို့ သော် မတူဘာသာ စကားသုံးစွဲသည့် မတူမျိုးနွယ်စု၏ အများဆန္ဒကို လိုက်လျော်ပြီး အစိုးရ ကျောင်း များတွင် ဟားခါးဘာသာ အစား မတူဘာသာ စကားကို ပြန်လည် သင်ကြား နိုင်ရန် သဘောတူခဲ့သည့်အတိုင်း မတူစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ အစည်း အဝေး၌ မတူပီမြို့ နယ်ရှိ အစိုးရကျောင်းများ တွင် မတူဘာသာ စကား သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အဓိက ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ တွင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့် မတူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြ သည့် Rev. Bawng Thang, Rev. Thang Len, Rev. Tui Hing နှင့် ဆရာကြီး Bung Kung တို့လည်း ယင်းအစည်း အဝေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် တခြားဒေသများတွင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့် မတူ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီများကို မတူပီမြို့ ပေါ်ရှိ မတူ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီကို ဗဟိုပြုလျက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မတူ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ဌာနချုပ်ကို လည်း မတူပီမြို့ တွင်သာ ထားရှိရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း The Matupi Times သတင်းစာ က ဖေါ်ပြထားသည်။
မတူ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ ၌ BBA ရုံးတွင်ပြုလုပ်ပြီး ၎င်းရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်များကို ယခုအစည်း အဝေးက ပြည်လည် ရွေးချယ်လိုက်သည်။